ဖိုင်ဘာ optic patch ကိုအသုံးပြုခြင်း - မိုးလုံလေလုံဆက်သွယ်ရေး Cable ကိုကုန်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံအဆောက်အဦးအပြင် Optical Fiber Cable ကိုတွင်အာရုံစူးစိုက်
နေအိမ် » ဖိုင်ဘာ optic patch ကိုအသုံးပြုခြင်း
ဖိုင်ဘာ optic patch ကိုအသုံးပြုခြင်း
ပထမ, ဖိုင်ဘာ optic patch ကိုကြိုးများအသုံးပြုခြင်း
နှစ်ဖက်စလုံးမှ optical transceiver များ optical ဖိုင်ဘာ Jumper သည်လှိုင်းအလျားတူညီရမည်. နှစ်ခုစွန်း optical ဖိုင်ဘာ တူညီသောလှိုင်းအလျား၏ optical module တွေဖြစ်ရမည်.
ပုံမှန်အခြေအနေများတွင်, လှိုင်းတို (850nm, 1300nm) optical module တွေ multimode ဖိုင်ဘာကိုအသုံးပြုပါ, လှိုင်းရှည် (1310nm, 1550nm) optical module များသည် data transmission ၏တိကျမှုကိုသေချာစေရန် single-mode fiber ကိုအသုံးပြုတယ်.
အသုံးပြုသောဖိုင်ဘာကိုကွေးခြင်းသို့မဟုတ်ခြုံခြင်းမပြုပါနှင့်, အရာဂီယာစဉ်အတွင်းအလင်းကို attenuation တိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်.
အပြီး ဖိုင်ဘာ Jumper အသုံးပြုသည်, ဖိုင်ဘာ connector ကိုအကာအကွယ်အဖုံးနှင့်ကာကွယ်ထားရမည်ဖြစ်သည်. ဖုန်မှုန့်နှင့်ဆီသည်အမျှင်ဓာတ်ပေါင်းစပ်ခြင်းကိုပျက်စီးစေသည်. ဖိုင်ဘာ connector ကိုညစ်ပတ်သည်ဆိုပါက, သငျသညျအရက်သန့်ရှင်းဖို့ဝါဂွမ်း swab ကိုသုံးနိုင်သည်, သို့သော်၎င်းသည်ကျွမ်းကျင်သောဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးကိရိယာကိုအသုံးပြုရန်အကြံပြုသည်, မဟုတ်ရင်ဖုန်မှုန့်ဟာဆက်သွယ်ရေးအရည်အသွေးကိုထိခိုက်လိမ့်မယ်.
1. အသုံးမပြုမီ, သုတ်ရန်အတွက်ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားသည့်ကိရိယာသို့မဟုတ်အရက်နှင့်စုပ်ယူနိုင်သောချည်များကိုအသုံးပြုရမည် ဖိုင်ဘာ Jumper ကြွေထုပ်နှင့် ferrule အဆုံးမျက်နှာသန့်ရှင်း.
2. အသုံးပြုသောဖိုင်ဘာ Jumper ၏ကွေးခြင်းအချင်း ၀ က်သည် ၃၀ မီလီမီတာအောက်သာရှိသည်.
3. ဖုန်မှုန့်များနှင့်လေထုညစ်ညမ်းမှုကိုကာကွယ်ရန် ferrule နှင့် ferrule အဆုံးမျက်နှာကိုကာကွယ်ပါ, နှင့် disassembly ပြီးနောက်အချိန်အတွက်ဖုန်မှုန့်ထုပ်ဆောင်ခဲ့ရမည်.
5. လူလုပ်နှင့်အခြား force majeure အချက်များကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ပျက်စီးမှု၏အမှု၌, ပျက်စီးသွားသောဖိုင်ဘာ Jumper အချိန်အတွက်အစားထိုးရပါမည်.
7. အကယ်၍ ပုံမှန်မဟုတ်သောအခြေအနေသည် optical network သို့မဟုတ် system တွင်ဖြစ်ပေါ်ပါက, အမှားဖယ်ရှားရေးနည်းလမ်းတ ဦး တည်းအားဖြင့်တ ဦး တည်းကိုစမ်းသပ်ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်. Jumper ကိုစမ်းသပ်တဲ့အခါ (သို့) ပြtroublနာရှာတဲ့အခါသင်ဆက်တိုက်စမ်းသပ်မှုကိုလုပ်နိုင်ပါတယ်. တစ်ခုလုံးကိုအကဲဖြတ်ရန်သင်များသောအားဖြင့်မြင်နိုင်သောလေဆာညွှန်ပြကိရိယာကိုသုံးနိုင်သည် ဖိုင်ဘာလင့်ခ်. သို့မဟုတ်ပါက၎င်း၏အမျိုးမျိုးသောညွှန်းကိန်းကိုစမ်းသပ်ဖို့တိကျတဲ့ဖိုင်ဘာသွင်းဆုံးရှုံးမှုဆုံးရှုံးမှု detector ကိုအသုံးပြုပါ. အကယ်၍ ညွှန်ကိန်းသည်အရည်အချင်းပြည့်မီသောအကွာအဝေးတွင်ရှိလျှင်, အဆိုပါ Jumper အရိပ်အယောင်ပုံမှန်ပါပဲ, မဟုတ်ရင်ကအရည်အချင်းမရှိဘူး.